Di iche iche Omenala - Eda Eco Technology Co., Ltd.
Self nrapado geomembranes
Omenala di iche
Akụkọ dị ebube
Landfill oru ngo
Ọrụ gas mmanụ
Ọwara na ụzọ ọrụ
&Lọ & flọ
Dam & Lake oru
Anyị agbakọwo na ụlọ ọrụ maka afọ 38. Kedu ihe na-akwado mmepe anyị na ọganiihu anyị? Ọ bụ ike ime mmụọ obi ike na nkwenkwe na omume nke ihe ọhụrụ na-aga n'ihu. A naghị agbagha agbagha na anyị enwegoro ngwa ọrụ yana usoro njikwa, mana nnukwu ikike ịkwọ ụgbọ elu nke ọdịda mmiri a na-adịghị ahụ anya bụ isi mmalite nke ihe ịga nke ọma anyị.
Ka ọ dị ugbu a, dịka ụlọ ọrụ dị iche iche na ọtụtụ ọdịbendị, anyị ghọtara na mmepe na-adigide chọrọ nraranye ogologo oge na ọrụ mkpokọta sitere n'akụkụ akụ na ụba, gburugburu ebe obibi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
N'ihe banyere mmetọ gburugburu ebe obibi, anyị na-etinye aka na mmepe na ihe ọhụrụ nke ihe ndị na-eme ka gburugburu ebe obibi dị mma. Mee ka oru ngo jiri ihe ndi ozo eji eme ka gburugburu ebe obibi ma obu meziwanye ihe eji emeputa.
Ọganihu ndị ọrụ
Mee ka onye ọ bụla na-arụ ọrụ rụọ ọrụ ọkụ ọkụ, hụ ụlọ ọrụ anyị na ọnọdụ anyị n'anya, ma na-emelite nka na ihe ọmụma ha oge niile. Mee ka onye ọrụ ọ bụla bụrụ aka ochie n’ọkwa ha. Kwe ka ndị ọrụ soro ezinụlọ ha na ụmụ ha kerịta mkpụrụ nke mmepe ụlọ ọrụ. Anyị bụ nnukwu ezinụlọ.
Development nkà ihe ọmụma
Mee ka ndị ahịa nweta ngwaahịa bara uru karị, ka ndị ọrụ nweta mmepe na-ekwekwu nkwa, mee ka ọha mmadụ nwekwuo mmekọrịta gburugburu ebe obibi, ka ndị na-ebubata ya wee melite ma melite. Ndị ahịa, ndị ọrụ, ndị na-eweta ngwaahịa na ọha mmadụ na-agakọ aka maka mmepe na-adigide.
Eda Eco Technology Co., Ltd. bụ nnukwu ụlọ ọrụ na-eme nnyocha, mmepụta na ire ahịa nke geosynthetics na ihe ndị na-egbochi mmiri macromolecule.
Okwu: No.32, na-ere nri ụlọ ọrụ ụlọ, Jinke Road, Jinniu District, Chengdu, China 610036